Cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo tababar loogu soo xiray xerada 54-aad. – Radio Daljir
Oktoobar 22, 2012 9:01 b 0
Garowe, Oct, 22 – Ciidamadaan oo ay tababarka siinayeen saraakiil u ka socotey ?wadanka Ethopia ayaa waxaa ay si toos ah u dhamaysteen tababar u socdey mudo (6) billood ah ?waxaana tababarkaasi u soo xiray M/waynaha Puntland Dr Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada.
Wasiiru Dawlaha maamul wanaaga madaxtooyada Puntland Maxamed Faarax Ciise (Gaashaan) oo la socdey waftiga madaxwaynaha ayaa radio Daljir u sheegay inay ciidamadaasi soo bandhigeen dhoolatus la xariira tababarkii ay qaateen islamarkaana uu salaan sharaf ka qaatay M/wayne Faroole ka dibna uu halkaasi kula hadlay.
Khudbada Madaxwaynaha ayaa diirada saaraysey dhiiragalin la xariirta sida ay xukuumadiisu diyaarka ugu tahay horumarinta hawlaha Ciidamada isagoo sheegay inay ciidamadaasi si toos ah ugu biirayaan ciidamda Daraawiishta Puntland.
Ma ahan markii ugu horaysey ee tababar noocaan oo kale ah loo soo xiro cutubyo ka tirsan ciidamada Daraawiishta Puntland, waxaana dawladda Puntland dhanka tababarada ciidamada ka caawisa dawladda federaalka Itoobiya.
C/raxmaan Xuseen Xassan ?Gaardi?